Ejipta: An-dalam-paharendrehana ve Ejipta? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2010 6:19 GMT
Namoaka tatitra manokana momba an'i Ejiptat sy ny hoaviny taorian'ny Filoha Hosni Mubarak ny The Economist, olona voatondro ho marary sain'ny taonjato faha-21 any Afovoany Atsinanana.
Io andàlana manaitra io no nanombohan'i Zeinobia ny lahatsorany.
Mamaky io tatitra io koa i Mohaly ary miblaogy ny fahasahiranan-tsainy:
Issandr El Amrani, ao amin'ny The Arabist, dia manamarika izany koa:
Ny Economist tamin'ity herinandro ity dia namoaka fandrakofana manokana momba an'i Ejipta izay tena mendrika fandalinana. Raha ny fahalalàna fa isaky ny folo taona ihany ny The Economist vao mamoaka fanaraha-maso firenena toy itony, dia efa ny fanintelony momba an'i Mubarak ity raha tsy diso tadidy. Mampanontany tena ahy ho fahasamihafàny amin'ireo teo aloha.
Raha ny feo mandeha momba ilay tatitra dia ahitana ny fifangaroharoan'ny tsirim-panantenana sy ny tsy fanekena/tsy hafalian'ny sasany noho ny tsy fahombiazan'i Ejipta — ny fanjakana “polisy” mpandray tsolotra ao, ny fampianarany. Ao anatin'ny rivotry ny tsy fahavitrihana sy fahamodamodahana manjaka be eto amin'ny firenena ary ireo fitanisàna feno fampitandremana manodidina ny ho fidarabohan'i Ejipta, mba mampitonitony ihany ny fanabaribariana ireo fiovàna nampihetsi-po nampidirin'ny vanim-potoana Mubarak teo amin'ny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika. Ho fiovàna mankamin'ny tsara ve, sa ny ratsy, sa fiovàna tsy azo nialàna avy amin'izao tontolo izao nanindry an'i Ejipta fa kosa tsy afaka nanindry azy i Ejipta ?